E.X.O အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ D.O. ရဲ့ History and career life (as an actor ) – Thit San Khant
Thit San Khant
Posted on June 23, 2017 June 23, 2017 by thitsankhant
E.X.O အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ D.O. ရဲ့ History and career life (as an actor )
အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့သူကတော့ EXO အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ D.O. ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Stage Name – D.O. (디오)
Birth Name – Do Kyung Soo (디경수)
Birthday – January 12, 1993
Favourite colour – black
Position – Main Volcalist
-D.O. ကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Goyang မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
-D.O. သည် မူလတန်းကို Goyang Poongsan မူလတန်းကျောင်းမှအောင်မြင်ခဲ့ပြီး အလယ်တန်းကို Baekshin အလယ်တန်းကျောင်းနှင့် အထက်​တန်းကို Baekseok အထက်​တန်းကျောင်းမှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
– သူ့မှာ Do Seungsoo လို့ခေါ်တဲ့ သုံးနှစ်ကြီးတဲ့အကိုတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
– D.O. ဟာ ဂီတကိုမူလတန်းကတည်းကဝါသနာပါခဲ့ပြီး သူအထက်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေသတွင်းအဆိုပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့ပြီး S.M. Entertainment ကကျင်းပတဲ့ audition မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အကြံပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
– D.O. ဟာ2010 ခုနှစ် S.M. audition မှာ Na Yoon Kwon ရဲ့ Anticipation ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ Brown Eyed Soul ရဲ့ My Story ဆိုတဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ audition မှာရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး S.M. ရဲ့သင်တန်းသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ သူကအထက်တန်းပြီးဖို့ နှစ်နှစ်ကျန်ပါသေးတယ်။
– D.O. က အရမ်းအေးတဲ့သူပါ။ S.M. လို entertainment ကြီးက audition အောင်မြင်ခဲ့တာတောင်မှ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုအသိမပေးခဲ့ပါဘူး
( ကိုယ်သာဆို တိုင်းသိပြည်သိပတ်ကြွားမှာ :3 )
-Training ကာလ နှစ်နှစ်ကြာအပြီးမှာ D.O. ကို EXO အဖွဲ့ရဲ့ ရှစ်ယောက်မြောက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့ January 30, 2012 မှာ debut လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
– D.O. ဟာ EXO အဖွဲ့ရဲ့ main vocalist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ EXO အဖွဲ့ကို 2013 ခုနှစ် April 8 ရက်နေ့မှာ MAMA ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ offical debut ပေးခဲ့ပါတယ်။
– သူ့ရဲ့ power (EXO characteristic supernatural power ) ကတော့ Earth ဖြစ်ပါတယ်။ D.O. ကအရမ်းအသန့်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အခန်းဖော်တွေညစ်ပတ်နေရင်လည်း အမြဲပွစိပွစိပြောတတ်ပြီး Member တွေကို တစ်ခါတလေမှာ ဟင်းချက်ကျွေးတတ်လို့ သူ့ကိုအမေလို့လည်း စပြီးခေါ်ကြပါတယ်။
-D.O. ဟာ အဆိုပိုင်းတွင်သာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းတွင်ပါထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
-2012 ခုနှစ်မှာ SBS ကရုပ်သံကရိုက်ကူးတဲ့ To the beautiful you ဆိုတဲ့ TV series စတင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
-2014 ခုနှစ် စက်​တင်​ဘာလမှာ Cart ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ အရန်အဖြစ်နဲ့စတင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ EXO အဖွဲ့က D.O. ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့မဟုတ်ဘဲ သူရဲ့နာမည်ရင်းဖြစ်တဲ့ Do Kyungsoo ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီး သရုပ်ဆောင်ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။
– Cart ဇာတ်ကားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူဟာ It’s OK, That’s love ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 51 ကြိမ်မြောက် Baeksang Arts Award ဆုပေးပွဲမှာ the Best New Artist and Popularity award အတွက် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2014 ခုနှစ်ရဲ့ idol- actors အယောက်လေးဆယ်ထဲမှာ D.O. က No.1 နေရာရခဲ့ပါတယ်။
– 2015, June မှာတော့ D.O. ဟာ KBS ရုပ်သံကရိုက်ကူးတဲ့ Hello Monster ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ချီးကျူးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။November 2015 မှာ အဲ့ဒီကားနဲ့ပဲ 52nd Grand Bell Awards မှာ Best Supporting Actor Award အဖြစ် လျာထားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
-EXOL အားလုံးသိကြတဲ့ EXO Next Door ဆိုတဲ့ TV series မှာလည်း 2015 ခုနှစ်မှာ EXO members တွေနဲ့အတူ lead role ကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
– 2016 , February မှာ မင်းသမီး Kim So Hyun နဲ့တွဲပြီး Pure Love ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
-2016, October 31 ရက်နေ့မှာစတင်ပြသတဲ့ Be Positive ဆိုတဲ့ Web Drama တစ်ခုမှာ မင်းသမီး Chae Seo Jin နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ web drama series ကို Samsung ကနေရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံး web drama အဖြစ်နဲ့စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။
-2016, November မှာ မင်းသားကြီး Jo Jung Suk ၊ မင်းသမီး Park Shin Hey တို့နှင့်အတူ My Annoying Brother ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားအတွက် နောက်ခံသီချင်းဖြစ်တဲ့ Don’t Worry ဆိုတဲ့သီချင်းကိုလည်း Jo Jung Suk နဲ့အတူတွဲပြီးသီဆိုခဲ့ပါတယ်။
-D.O. က The Underdog ဆိုတဲ့ animation ကာတွန်းကားမှာလည်း အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။
-သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး 2014 ခုနှစ်မှာ 16th Seoul International Youth Flim Festival မှာ It’s OK, That’s Love ဇာတ်ကားနဲ့ Best Yong Actor ဆုရခဲ့ပါတယ်။3rd APAN Star Awards ဆု​ပေးပွဲမှာ It’s OK, That’s Love ဇာတ်ကားနဲ့ပဲ Best New Actor ဆုရခဲ့ပါတယ်။
– 2016 မှာ Max Movie Best Films Awards ဆု​ပေးပွဲမှာ Rising Star ဆုကိုရခဲ့ပြီး 52nd Baeksang Arts Awards ဆု​ပေးပွဲမှာ Pure Love ဇာတ်ကားနဲ့ Most Popular Actor ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။
-အခု 2017 မှာလည်း My Annoying Brother ဇာတ်ကားနဲ့ 53rd Baeksang Arts Award မှာ Most Popular Actor ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။
-ဒီနှစ်ထဲမှာပြသမယ့် Room No.7 ဆိုတဲဇာတ်ကားမှာလည်း Shin Ha Kyun နဲ့အတူ lead actor အဖြစ်နဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
-2017, May 8 ရက်နေ့က Swing Kids ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ D.O. က ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ S.M. Entertainment က ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ သူကမြောက်ကိုရီးယားစစ်သား Ro Ki Soo ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ ။ စစ်သားပုံစံနဲ့သူ့ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပြီး Op တော့ ရင်ခုန်နေပါပြီ
သူ့ကို nominated လုပ်ခြင်းခံထားရတဲ့ award တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ D.O. ဟာဆိုရင် သူနဲ့အတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့သူတိုင်းရဲ့ ချီးကျူးခြင်းကိုအမြဲခံရတဲ့သူပါ။
သူနဲ့အတူတွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းက သူ့ကိုနွေးထွေးဖော်ရွေပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာလောကထဲကိုဝင်လာတာ ငါးနှစ်ကျော်ပဲရှိသေးပေမယ့် အဆိုပိုင်းမှာရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါအောင်မြင်နေတဲ့ ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ To the beautiful you ဇာတ်လမ်းတွဲက poster ပါ
ဒါကတော့ EXO Next Door ဇာတ်လမ်းတွဲက poster ပါ ❤
ဒါကတော့ Cart ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ
ဒီပုံလေးတွေကတော့ Hello Monster ဇာတ်ကားမှာ သူပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကပုံလေးတွေပါ
ဒါကတော့ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Hello monster ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ poster ပါ
ဒါကတော့ My Annoying brother ဇာတ်ကားက poster လေးပါ
ဒါကတော့ သူ supporting role ကနေ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ It’s OK ,That’s love ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ
ဒါကတော့ သူ lead actor အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Pure Love ဇာတ်ကားရဲ့ poster လေးပါ
Post By : EinGyin Phyu
Previous PostPrevious A Blind Girl and Her Love (မြန်မာပြန်)
Next PostNext SM entertainment ရဲ့ အနုပညာသတင်း